Hyouka - के एक मौसम2सम्भव छ? - पालना दृश्य
चितुवा र ओरेकी सँगै
by लिली गार्सिया 7th नोभेम्बर 2020 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड Hyouka मा - के एक मौसम2सम्भव छ?
"Hyouka" बाट लिइएको [सत्र १, एपिसोड २२] - क्योटो एनिमेशन
ह्युउका हाईस्कूल विद्यार्थीहरूको समूहको वरिपरि केन्द्रहरू हुन् जसले क्लबलाई “क्लासिक लिट क्लब” भनेर चिनिन्छ। यस क्लबमा उनीहरूको समयमा उनीहरू "रहस्य" लाई सुल्झाउने काममा जान्छन् र अरूलाई त्यस्तै सम्बन्धित समस्याहरूको मद्दत गर्दछन्। २२ एपिसोड स्लाइस अफ लाइफ एनिमेमा main मुख्य पात्रहरू र अन्य पात्रहरूको होस्ट प्रस्तुत गरिएको मूल अप्रिल २२, २०१२ सेप्टेम्बर १ 22, २०१२ सम्म प्रसारित भयो, मूल पहिलो एपिसोड अप्रिल १,, २०१२ को कडोवा सिनेमा, शिन्जुकुमा एक विशेष कार्यक्रममा प्रिमियरि with भएको थियो। , टोकियो। अन्तिम घटनाका घटनाहरूले धेरै विवादास्पद देखे तर चितवन र ओरेकीले उनीहरूको मतभेद र भविष्यका महत्वाकांक्षाहरूको बारेमा छलफल गरे।
सर्वप्रथम हामीले ह्युउकाको अन्त्य र यसको संरचना भएको बारेमा कुरा गर्नु आवश्यक पर्दछ, हामी एक मौसम the को सम्भावनामा पर्नु भन्दा पहिले। ह्युउकाको अन्त्य कथित समग्र अन्त हुने र पठाउन कत्तिको ठोस थिएन। यद्यपि यसले हामीलाई धेरै खुशी र विचारशील नोटमा छोडियो। यो Oreki र Chitanda आफ्नो भविष्यको बारेमा एक राम्रो कुराकानी संग अन्त भयो र अब तिनीहरू कहाँ हुनेछ। यो गतिशील विकास देख्न धेरै चाखलाग्दो थियो र यो दुबै पात्रहरूको पक्ष हो जुन मैले पहिले देखेको थिएन।
यस अन्तिम दृश्यको सानो अंश पनि थियो जुन मलाई महत्वपूर्ण बनाउँदछ। यो त्यहीं हो जहाँ ओरेकीले चितवनलाई सोध्ने गरिरहेकी थिईन् उनीलाई पछिको कामको बारेमा। ओरेकीले सोध्यो कि यदि चितवनले त्यस्तै जागिर खायो भने के चितवनले सोच्छ? चितवनको प्रतिक्रिया अपेक्षित भएजस्तै हो, उनी छक्क पर्छिन्, जबसम्म कि उनीले वास्तवमा उनलाई सोधेको थिएन र वाक्यको पहिलो भागसम्म मात्र पुग्न सकेन। यो किनभने चितवनले उहाँलाई सजाय समाप्त गर्न सोध्यो, जसलाई उनले "ओह केहि छैन" भने। यसले उनीहरूको भविष्य सँगै मिलेर सint्केत गर्दछ र यदि उनीहरूले एक अर्कालाई फेरि देख्छन्।
अन्त्य वास्तवमा एक मौसम २ को सन्दर्भमा धेरै संकेत गरेन। यसको लागि त्यहाँ कारण छ, जुन हामी पछि आउँनेछौं। यस दृश्यले मुख्यतया चितवन र ओरेकी दुबैको भावना व्यक्त गर्थ्यो, साथ साथै वयस्क-हुड र बाल-हुडको बारेमा पाठ पनि चित्रण गर्दछ। ओरेकीले चितवनलाई आफ्नो बारेमा वास्तवमा कस्तो महसुस गर्यो भन्न चाहान्थ्यो र इबोराको बारेमा अघिल्लो एपिसोडको क्रममा सतोशीको हिचकिचाहट बुझ्यो। रूखहरू माथि बतास चलेको हेराई र खोज्नु भन्दा पहिले दुई जनाले केहि अरु शब्दहरू साटासाट गरे। यो एक श्रृंखला समाप्त गर्न धेरै राम्रो तरीका हो, विशेष गरी Hyouka जस्तो र मलाई लाग्दैन कि यहाँ केहि गर्नु भएको थियो। मलाई चितान्डा र ओरेकी बीचमा केहि देख्न मन परेको थियो तर त्यो हामी एनिमेमामा भएसम्म।
Hyouka को अनुकूलन बुझ्दै
एक सीजन २ हुन्छ वा हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामीले Hyouka को एनिमेस रूपान्तरण र यो वास्तवमा अनुकूलन गरिएको सामग्रीको बारेमा कुरा गर्न आवश्यक छ। "Hyouka" २००१ द्वारा लेखिएको थियो हुनोबु योनेजावा। श्रृ we्खलाहरू हामी एनिमेमा हेर्ने सबै कुराको वरिपरि केन्द्रहरू हुन् र म के बुझ्छु एनिमेस लगभग सही तरिकाले अनुकूलित गरिएको थियो, शायद नै केहि छोडियो वा झन् खराबको साथ। त्यस अंशका लागि एनिमेसनले यो काम गर्‍यो र त्यहाँ केही गलत थिएन। यद्यपि एनीम अनुकूलनले योनेजावाले लेखेको हल्का उपन्यास मात्र समेट्छ र यो कुनै विस्तार हुन सक्दैन, कि यो गर्न सक्दिन। ह्युउका भनेर चिनिने लाइट उपन्यास श्रृंखलाको निष्कर्ष निकालिएको छ र त्यहाँ अझ कुनै सामग्री लेखिएको छैन। अर्को शब्दमा, उपन्यास वा खण्डहरू मैले भन्नु पर्छ, निष्कर्षमा पुगेको छ।
के त्यहाँ मौसम २ छ?
यो भन्न गाह्रो छ तर मूल उपन्यासको अधिक खण्डहरू नभएसम्म ह्युउका एक सीजन २ सम्म फर्किने सम्भावना छैन। यो मुख्यतया उपन्यासको समापन भएको तथ्यका कारण हो र ह्युउका (एनिमेस अनुकूलन) जारी गर्न नसक्दासम्म त्यो हुन्छ। यो केस हुन सक्दछ यदि मूल लेखक मरेका थिए वा लेख्न जारी राख्न असमर्थ थिए, तर यो केस हैन। हुनोबु योनेजावा, जो १ 1978 .XNUMX मा जन्म भएको थियो र अझै सम्म उहाँ आफ्नो काम जारी राख्नुहुन्छ। के उनले यो उपन्यास जारी राख्ने हो कि भनेर सोध्नु त्यस्तो तनाव हो? यो निश्चित रूपमा सम्भव छ तर सम्भव छैन।
हामीले के आशा गर्न सक्दछौं जुन हामी पछिल्लो पटक छोडेर गएको हुन सक्छ। मलाई लाग्छ प्रायः यो ह्युउकाको पूरा दोस्रो उपन्यासमा आउँनेछ, जहाँबाट हामी प्रस्थान गर्यौं। अर्काे तरीका यो संग्रहीत गर्न सकिन्छ उपन्यास सेट हुन सक्छ maybe-3० वर्ष पछि anime को अन्त्य घटनाहरु पछि। जहाँ हामी Oreki र Chitanda एक अर्कालाई अलविदा भन्छन्। मैले सोचें कि यो Hyouka को anime अनुकूलन जारी राख्नको लागि सबैभन्दा उचित तरिका हो किनकि यसले मौलिक घटनाहरूको after-5 वर्ष पछि हुने दोस्रो उपन्यास लिनु बढी अर्थपूर्ण बनाउँछ। मलाई लाग्छ यसको कारण यो हो कि ह्युउका र हाम्रा चार मुख्य पात्रहरूको कथा अन्त हुन थालिसक्यो, उनीहरू स्कूलमा आफ्नो समयको अन्ततिर थिए। यस बिन्दुबाट एनिमेमाले उठाउनु भनेको यसको अर्थ हामीले चित्रण्ड, ओरेकी, इबारा र सतोशीको जीवन कसरी अगाडि बढेको हेर्छौं। यो अन्वेषण गर्न को लागी एक रमाईलो अवधारणा हुनेछ र मलाई लाग्छ कि यस को लागी धेरै संभावना छ।
परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी भन्न गाह्रो छ, २०१२ मा एनिमेसनले उत्पादन बन्द गर्यो सबै पछि (मंगाबाट सामग्री) लाई अनुकूलित गरिसकेपछि। यो एनिम अनुकूलन मा काम भएको थियो 2012 वर्ष भयो। यद्यपि, २०१ 8 मा Hyouka को मुख्य घटनाहरू प्रस्तुत एक प्रत्यक्ष-एक्शन चलचित्र जारी भयो। यसको महत्व यो छ कि यो एक स्टुडियोले यो गर्न उचित लाग्यो जस्तो देखिन्छ, प्रत्यक्ष-एक्शन चलचित्र मूल उपन्यास लेखिएको लगभग १ years बर्ष पछि लेखिएको थियो। त्यसो भए यसको मतलब के हो? के लाइभ-एक्शन फिल्महरू अझै Hyouka को बारे मा बनेको छ भने anime अनुकूलन को एक सीजन 2017 सम्भव छ? यो केवल years बर्ष अघि थियो, अन्य OVA र स्पिन अफ लेखिएको र उत्पादनको साथ। Hyouka एक धेरै लोकप्रिय anime जस्तो लाग्छ त्यसैले पक्कै यो एक मौसम 16 भन्दा लामो हुँदैन।
2 मौसम कहिले हावा हुन्छ?
"Hyouka" बाट लिइएको [एपिसोड १]]
मैले २०२२ र २०२ between बीचमा कहीँ पनि छलफल गरेको सबै कुरा दिईएको भन्नु पर्छ। यसको लागि मेरो मुख्य कारण ह्युउकाले आफ्नो पहिलो रिलीजको समयमा २२ एपिसोड पनि ओभिएको साथमा प्रस्तुत गरेको हो। यदि हामी नयाँ सिजनको यो आशा गर्न सक्दछौं भने यो समय अझ सटीक देखिन्छ। जब एक अन्तर्वार्ता मा सोधियो योनेजावा Hyouka को एक सीजन2को लागी उनको चासो कम थियो भने।
यसको साथसाथै मलाई लाग्छ कि २०१२ मा क्योटो एनिमेसन स्टुडियो १ भवन (ह्युउकाको एनिमेस अनुकूलनको लागि जिम्मेवार स्टुडियो) मा भएको भयानक आगजनी हमलाको उल्लेख गर्नु आवश्यक छ जसले people people व्यक्तिको ज्यान लियो र अपंग र। 2019 जनालाई घाइते बनायो। यदि तपाईं आक्रमणको बारेमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ। मेरो आतंकवाद र हिंसाको प्रभावले प्रभावित सबैलाई बाहिर जान्छ। यी सबैका बाबजुद पनि, शुभ समाचार यो हो कि यस वर्षको रूपमा स्टुडियो आक्रमणबाट पूर्ण रूपले निको भइसकेको छ र पुनर्निर्माणको लागि कदम चाल्दैछ। अर्को स्टूडियोले भने कि उनीहरु भविष्यमा ह्युकाको दोस्रो सत्र जारी गर्न चाहान्छन्।
त्यसैले मुख्य रूपमा, सीजन २ को लागि सम्भावित यी तीन चीजहरूमा निर्भर गर्दछ:
If योनेजावा या त ह्युउकाको कथा जारी राख्न वा अन्य लेखकहरू / निर्माताहरूलाई यसलाई जारी राख्न अनुमति दिन इच्छुक छ।
क्योटो एनिमेसन पुन: प्राप्ति पछि निर्माण जारी राख्न वा अन्य स्टूडियोले भूमिका लिने सक्षम भइरहेको
एक सीजन २ को लागी आवश्यकता र उत्साह। (कति व्यक्ति ह्युउकाको मौसम २ हेर्न चाहन्छन्) र यदि यो लाभदायक हुनेछ।
र यदि Hyouka को एक सीजन2चार्जकर्ताहरु र उत्पादन कम्पनी को लागी यसको लायक छ।
यद्यपि यति मात्र भए पनि हामी वास्तवमै भन्न सक्छौं। यदि तपाईंलाई यो लेख उपयोगी भएको पाए कृपया यसलाई मनपराउनुहोस् र साझेदारी गर्नुहोस्। तपाईं हाम्रो अन्य लेख यहाँ जाँच गर्न सक्नुहुन्छ:
टैग: animehyouka animehyoukaseason1 animehyoukaseason2 animehyoukaseason2ep प्रकरण1 animehyoukaseason2releasedate hyouka hyoukaanieseason2 article hyoukaanimefinalep प्रकरण hyoukaanimegeteason2 hyoukaanimegetseason2? hyoukanime hyoukaseason2 hyoukaseason2 article hyoukaseason2ep प्रकरण1 सिजन 2ofhyouka whyoukaanimegetseason2? willhyoukanimegetaseason2 willtherbeeaseson2ofhyouka
अघिल्लो प्रविष्टि Netflix मा शीर्ष 10 स्पेनिश डब गरिएको एनिमे [इन्सर्ट क्लिपहरूको साथ]
अर्को प्रविष्टि GANGSTA। - किन एक सीजन २ सम्भव छ